गाडि चालक कुटिएको भिडियो खिच्ने युवालाई प्रहरीले विप्लवको कार्यकर्ता भन्दै निर्घात कुटे::mirmireonline.com
पाँचथर, ५ चैत ।
पिकअपका चालकसहित तीनजनालाई प्रहरीले निर्घात कुटपिट गरेको छ। फिदिमदेखि चाउचाउ बोकेर नांगिन गइरहेको कञ्चनजंघा इन्टरप्राइजेजको चाउचाउ बोकेर गइरहेको मे १ च ४५५७ नम्बरको गाडीका चालकसहित तीनजनालाई नागिन प्रहरी चौकीका हवल्दार टीका बस्नेतले निर्घात कुटपिट गरेका हुन्।
हवल्दार बस्नेतले गाडी चालक फिदिम ४ बस्ने भीमबहादुर विश्वकर्मा र सहचालक जीवन लावरलाई कुटपिट गरेका हुन् । उनीहरुलाई कुटेको भिडियो खिचेका दीपक फुयाललाई पनि उनले कुटपिट गरे ।
भिडियो खिच्ने फ्यालाई भने विप्लवको कार्यकर्ता रहेछस् भन्दै कुटेका उनले बताए । चालक विश्वकर्मा र सहचालक लावरलाई प्रहरीले कुटपिट गरिरहेको देखेपछि आफ्नो मोवाइलनमा दीपक फुयालले कुटपिट गरिरहेको भिडियो खिचेका थिए।
चालक र सहचालकलाई कुटिरहेका हवल्दार वस्नेतले फुयाललाई किन भिडियो खिचेको ? पत्रकार हो ? भनेर सोधेका थिए। तर आफू पत्रकार नभई सामान्य नागरिक भएको भनेपछि प्रहरी हवल्दारले फुयाललाई घुडा टेक्न लगाएर विप्लव समूहको कार्यकर्ता पो रहेछस् भन्दै तिग्रामा लाठी बजारेको पिडित फुयालले अन्नपूर्ण पाेष्टका पत्रकार भीमकुमार बाँस्काेटालाइ बताएका छन् ।
‘विप्लवको कार्यकर्ता रहेछ गोली ठोक्छु भन्दै हवल्दारले मलाई पनि कुटे’, तिघ्राको निल डाम देखाउँदै फुयालले भने, ‘गाउँमा प्रहरीको दादागिरीले सर्वसाधारण मारमा छौँ।’उनको तिघ्रामा निलडाम रहेको छ । भने चालक विश्वकर्माको पछाडिको भाग र तिघ्रामा गरी पाँच ठाँउमा निल डाम देखिएको छ। सहचालक लावरको पनि तिघ्रामा निलडाम छ ।
उक्त पिकअप नांगिनको उकालोमा पुगेपछि हवल्दार बस्नेतले गाडी रोक्न लगाएका थिए । तर उक्त स्थानमा गाडि रोक्दा दुर्घटना हुन सक्ने भएकाले यहाँ रोक्न ठाउँ छैन भनेर चालकलाई गाडिलाई अगाडि बढाए । र अलि सम्म स्थानमा पुर्यापछि मात्रै रोके तर हवल्दार त्यहाँ पुगे र चालक तथा सहचालकलाई झारेर एक्कासी भाटा बर्साए । चालकले भने ।
त्यो देखेपछि पुयालले मोवाईलले भिडियो खिचेका थिए । अहिले कुटपिटमा संलग्न हवल्दार बस्नेतलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय फिदिम ल्याइएर छानबिन भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।